Giredhi rehurumende yechikoro ichi rakatemerwa sei?
Chikoro chega chega chinowana mucherechedzo wezviratidzo zvese zvinoshanda. Izvo zviyero zvezviratidzo izvi zvinorema kuburitsa yekupedzisira AF tsamba mavara, zvichibva pachiyero che 0-100 point. (Dhata dhairekodhi: 2018-2019 chikoro chegore) Dzidza zvakawanda
Ichi chinongedzera chinodzidzisa kugona kwevadzidzi vegiredhi-zviyero zvechirungu muChirungu / Mutauro Nyanzvi neMathematics pachikoro ichi.
Ichi chinongedzo chinodzidzisa kukura kwemudzidzi kusvika pahunyanzvi pachikoro. Mudzidzi wega wega anowana mapoinzi zvichienderana nerudzi rwekukura kunoratidzwa (kukura kwakaderera, kukura kwechiitiko, kukura kwakanyanya). Pfungwa dzakapihwa uchishandisa iyo kukura kunehunyanzvi tafura. Zvikoro zvinogona kudarika zana mapoinzi pane ino metric.
Kupedza kudzidza uye Koreji uye Kugadzirira Kuita
Ichi chinongedzera chinodzidzisa kupedzisa kwemudzidzi kweIndiana kupedza zvinodikanwa mukati memakore mana nemakore mashanu pachikoro, uye kudzidziswa kwemudzidzi kunoratidza posecondary kuverenga.